मध्यबिन्दु अनलाइनसुशासनका पक्षमा हाम्रो ख़बरदारी | को हुन् मर्यादित महिनावारीकी अभियान्ता राधा पौडेल ?
पश्चिम रुकुममा भएको हत्या घटनाको छानबिन गर्न सरकारसँग माग
पत्रकार र मिडिया हाउसलाई सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध गराउन देउवाको माग
मेलम्चीका दुईजनाको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ
को हुन् मर्यादित महिनावारीकी अभियान्ता राधा पौडेल ?
मध्यविन्दु/काठमाडौ – महिनावारी बार्ने चलनविरुद्धको अभियानमा करिब १६ वर्षदेखि सक्रिय राधा पौडेल सामाजिक अभियान्ता हुन् । १४ वर्षको हुुँदा पहिलो पटक महिनावारी भएकी राधाले नबार्ने निर्णय गरेर घर छाडेकी थिइन् । उनी महिनावारीलाई पापसँग जोडेर बार्ने कु–प्रथाको अन्त्य गर्न निरन्तर जुटीरहेकी छिन् ।
महिनावारी सम्बन्धी घरपरिवार अनि समाजमा देखिएको अनौठो अभ्यासलाई ७ वर्षको उमेरदेखि उनले महसुस गर्न थालेको र ९ वर्षको उमेरमा केटी भनेको त अर्कै जाति रहेछ भन्ने महसुस गरी निकै पीडाबोध भएको अनुभव सुनाउँछिन् । उनले त्यो पीडालाई आत्महत्यासम्म पनि नपुर्याएकी होइनन् तर बाल मनोविज्ञान क्षणमा परिवर्तन हुन सक्ने भएर होला आज राधा जिउँदो छिन्, जो समाज परिवर्तनको बाटोमा छिन् । महिनावारी बार्ने चलनविरुद्ध उभिएकी राधाले थुप्रै उतारचढावको सामना गर्नुपर्यो ।
उनी भन्छिन्, ‘आजको दिनसम्म महिनावारी बार्ने र क्षमा पूजा लगाउने कार्य गरेको छैन, यो प्राकृृतिक नियम हो । हाम्रो शरीरको शुद्ध रगत बाहिरिएको हो, यो सबै बझ्दा बुझ्दै किन बार्ने ?’ पौडेलले आफ्नी आमा स्वर्गीय हुँदा समेत भाइसँगै बसेर आफूले कर्म समेत गरेको बताइन् । त्यसबखत आँफु महिनावारी भएको तर यस्तो प्राकृतिक नियमलाई धर्मसँग जोड्नु घातक हुने सोचेर उनी यो लडाइँमा एक्लै भएपनि उभिने अठोटका साथ उभिएकी छिन् । उनले जीवनको आधाभन्दा बढी समय दुर्गम जिल्लामा बिताएकोले उनी रुढीवादी संस्कारको अन्त्यको बाटोमा सक्रिय छिन् ।
राधाले २०५१ सालमा पोखरा नर्सिङ क्याम्पसबाट स्टाफ नर्सको पढाइ गरेकी थिइन् । पौडेलले २०५८ सालमा महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसबाट बीएन गरिन्, त्यसैगरी त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट स्वास्थ्य विषयमा एमएड गरेकी राधाले त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा एमए पनि गरिन् । यतिले मात्र उनको अध्ययन सकिएन र फिलिपिन्सबाट एमडीएम पनि गरिन् । उनले महिनावारी बार्ने नाममा धेरैले ज्यान गुमाएको र विभिन्न रोगको शिकार भएको देखेकी छिन् ।
महिनावारी बारे थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान पनि गरेकी पौडेल भन्छिन्, ‘त्यो अवस्थामा महिला मानव होइन, कुनै पशु हो र उसलाई गोठमा परालमाथि राखिन्छ । कसरी गर्न सक्छ मानिसले मानिसमाथि यस्तो व्यवहार यो पनि कुनै संस्कार हो ? राज्यले किन ध्यान दिँदैन यस्ता विषयमा ? पश्चिम नेपालमा व्याप्त छाउपडीको नाममा हुने यस्ता विभेदविरुद्ध केही गर्ने र यस्तो कुप्रथाको उन्मूलन गर्ने अठोटसहित लडिरहेकी राधा यतिवेला मर्यादित महिनावारीको अभियानमा छिन् । खलङ्गामा हमला किताबबाट मदन पुरस्कार जित्न सफल राधाले महिनावारीसम्बन्धी पुस्तक ‘मर्यादित महिनावारी हामी सबैको जिम्मेवारी’ प्रकाशन गरिसकेकी छन् ।
होम क्वारेन्टाइनमा बसेकी गर्भवती महिलाको मृत्यु